Kwakunye neMiqathango Advent Calender |
Idipozithi £ 10 ukufumana 25 ijija kwi Gonzo Ukufuna
Le zokupasa ziya kuba esebenzayo ngemihla 3rd December 2016 (IGMT).
The ijija iya kuba 20p uxabisa kwaye isemthethweni Gonzo Ukufuna
Abadlali ziya kufumana ezona 25 aziyeki simahla Gonzo Ukufuna kuphela
Le zokupasa ziya kuba isemthethweni idipozithi yakho wokuqala loo mini kuphela xa usebenzisa Code Bonus “GONZO25”
Ukuze isebenze abadlali aziyeki kufuneka kuphehlelela Gonzo Ukufuna
Kuphela ubheja ngezi imidlalo: Starburst, Gonzo Ukufuna, Twin Spin, Spinata Grande, iphiramidi, ihagu Ubutyebi, iphaki yasemazantsi, Jack Hammer, amagwegwe Amaqhawe, dazzle Me, Neon Stax, Dracula, KuMajeke
weembotyi, noloyiso, bayotywe Rush, Lights, Disco ijija, koi Princess, Mythic Ntombazana, Ibangela, stickers, Magic ewebhu, Blackjack Classic, iziqhamo Shop, iintyatyambo, ezikucaphukisa Tower, Fisticuffs, Angler Lucky, Isaqhwithi Farm Escape, Subtopia, Jack Hammer 2, Isandi esikhulu, Man ezingabonakaliyo, iphaki yasemazantsi 2 bayotywe Chaos, Ukumkani Slots, njengabaphambukeli, vutha, Izibhamu neerowuzzi, Master of Mystery, qhuba, Aloha, Jimi Hendrix, Champions Cup, Nrvna, Xa neeHagu Fly, motorhead, Ezifihlakeleyo Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
Idipozithi £ 10 ukufumana 10 ijija kwi Gonzo Ukufuna
Le zokupasa ziya kuba 2nd esebenzayo ngemihla, 10th ne-17 Disemba 2016 (IGMT).
Ibhonasi eyi 10 Aziyeki ziya kongezelelwa kwi-akhawunti yakho.
Ezi ijija ziya kuba 20p uxabisa kwaye isemthethweni Gonzo Ukufuna kuphela
Abadlali ziya kufumana ezona 10 aziyeki simahla Gonzo Ukufuna
Le zokupasa ziya kuba isemthethweni idipozithi yakho wokuqala loo mini kuphela xa usebenzisa Code Bonus “GONZO10”
Kuphela ubheja ngezi imidlalo: Starburst, Gonzo Ukufuna, Twin Spin, Spinata Grande, iphiramidi, ihagu Ubutyebi, iphaki yasemazantsi, Jack Hammer, amagwegwe Amaqhawe, dazzle Me, Neon Stax, Dracula, UJack kunye Beanstalk, noloyiso, bayotywe Rush, Lights, Disco ijija, koi Princess, Mythic Ntombazana, Ibangela, stickers, Magic ewebhu, Blackjack Classic, iziqhamo Shop, iintyatyambo, ezikucaphukisa Tower, Fisticuffs, Angler Lucky, Isaqhwithi Farm Escape, Subtopia, Jack Hammer 2, Isandi esikhulu, Man ezingabonakaliyo, iphaki yasemazantsi 2 bayotywe Chaos, Ukumkani Slots, njengabaphambukeli, vutha, Izibhamu neerowuzzi, Master of Mystery, qhuba, Aloha, Jimi Hendrix, Champions Cup, Nrvna, Xa neeHagu Fly, motorhead, Ezifihlakeleyo Atlantis, Secrets of Christmas will count towards the reduction of the wagering requirement
50% Asingqinelani £ 100
Le zokupasa ziya kuba olusebenzayo 7 December (IGMT).
Ukuze ufaneleke ukuba le bonus, Abadlali kufuneka idipozithi ubuncinane £ 10 ngomhla ukukhuthazwa.
Ibhonasi eyi 50% ebibekwe yakho ukuya kuma £ 100 iya kongezwa kwi-akhawunti yakho.
Le bonus iya kube ixakekile idipozithi yakho okokuqala kwixesha zokukhuthaza xa usebenzisa ikhowudi ibhonasi “AMASHUMI AMAHLANU”
Le promotion mayenziwe isebenze kuphela kube kanye kwixesha zokukhuthaza.
Idipozithi £ 10 ukufumana 50 Gonzo ijija
Le zokupasa ziya kuba esebenzayo kwi-23 Disemba 2016 (IGMT).
Abadlali ziya kufumana ezona 50 aziyeki simahla Gonzo Ukufuna.
Le zokupasa ziya kuba isemthethweni idipozithi yakho wokuqala loo mini kuphela xa usebenzisa Code Bonus “GONZO50”
200% Asingqinelani £ 40
Le zokupasa ziya kube ixakekile 4, 13th, 16th kunye 21 December (IGMT).
Ibhonasi eyi 200% ebibekwe yakho ukuya kuma £ 40 iya kongezwa kwi-akhawunti yakho.
Le bonus iya kube ixakekile idipozithi yakho okokuqala kwixesha zokukhuthaza xa usebenzisa ikhowudi ibhonasi “200”
100% Asingqinelani £ 100
Le zokupasa ziya kube ixakekile 1st, 5th, 8th, 15th and 22 Disemba (IGMT).
Ibhonasi eyi 100% ebibekwe yakho ukuya kuma £ 100 iya kongezwa kwi-akhawunti yakho.
Le bonus iya kube ixakekile idipozithi yakho okokuqala kwixesha zokukhuthaza xa usebenzisa ikhowudi ibhonasi “100”
Idipozithi £ 10 ukufumana 25 aziyeki Starburst
Le zokupasa ziya kuba 6th imihla esebenzayo kunye 12 December 2016 (IGMT).
Ezi ijija ziya kuba 10p uxabisa kwaye isemthethweni Starburst kuphela
Abadlali ziya kufumana ezona 25 aziyeki simahla Starburst
Le zokupasa ziya kuba isemthethweni idipozithi yakho wokuqala loo mini kuphela xa usebenzisa Code Bonus “STAR25”
Ukuze isebenze i aziyeki abadlali kufuneka kuphehlelela Starburst
300% Asingqinelani £ 30
Le zokupasa ziya kuba esebenzayo ngoDisemba 9 no 19 (IGMT).
Ibhonasi eyi 300% ebibekwe yakho ukuya kutsho £ 30 iya kongezwa kwi-akhawunti yakho.
Le bonus iya kube ixakekile idipozithi yakho okokuqala kwixesha zokukhuthaza xa usebenzisa ikhowudi ibhonasi “300”
10 aziyeki Starburst Ezamahala
Le zokupasa ziya kuba esebenzayo ngemihla 18 December 2016 (IGMT).
The ijija iya kuba 10p uxabisa kwaye isemthethweni Starburst kuphela
Abadlali ziya kufumana ezona 10 aziyeki simahla Starburst
Idipozithi £ 10 ukufumana 100 aziyeki Starburst
Le zokupasa ziya 14 esebenzayo ngemihla, 20th kunye 24th December 2016 (IGMT).
Ibhonasi eyi 100 Aziyeki ziya kongezelelwa kwi-akhawunti yakho.
Le zokupasa ziya kuba isemthethweni idipozithi yakho wokuqala loo mini kuphela xa usebenzisa Code Bonus “STAR100”